Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Firavaka lafo vidy sy famantaranandro vaovao SABOTEUR natomboka
Ny marika firavaka sy famantaranandro vaovao SABOTEUR dia manambara ny fandefasana azy eran-tany amin'ny Internet, mampiditra ny fivarotana tranonkala manerantany amin'ny saboteur.world. Kasaina hanokatra ny magazay voatokana voalohany amin’ny telovolana voalohany amin’ny taona 2022.
SABOTEUR no fiandohan'ny tarana-mpanjaka vaovao. Nipoitra avy amin'ny fifanakalozan-kevitra lalina teo amin'ny mpanorina Thomas Sabo sy ny zanany lahy Santiago Sabo ilay hevitra. Ny mpanakanto sady vadin'i Thomas Sabo, Rita Sabo, dia manara-maso ny fizotran'ny famoronana sy ny famolavolana ny marika.
Ao amin'ny SABOTEUR, ny ara-panahy dia mandray anjara lehibe amin'ny fampifangaroana ny mistika sy ny jeometrika, mifototra amin'ny fotoana mahagagan'ny alchemy. Ny endrik'ireo firavaka SABOTEUR dia sahy, ny endriny minimalista, ary vaovao amin'ny fomba fiasany amin'ny vatana. Ny marika dia misy tsipika vokatra roa, Elemental sy Sacra, izay misy rojo rohy matanjaka, endrika geometrika, ary miverina amin'ny marika tsy manam-potoana. Ny iray amin'ireo singa manan-danja dia ny Planeta Masina, pendant iray hampahatsiahivana antsika ny tokony ho ankamamiantsika ny tontolontsika manokana sy ny fanjakantsika.
Ho fanampin'ny filozofian'ny saina sy mitahiry loharanon-karena, ny marika dia mifantoka amin'ny fampiasana fitaovana avo lenta, asa tanana tsy azo lavina ary ny kalitao avo indrindra. Ny firavaka dia vita amin'ny volafotsy 925 Sterling, volamena mavo sy fotsy 18k, mineraly tsy manam-paharoa ary diamondra Fairtrade fotsy sy mainty. Ny famantaranandro ao amin'ny fanangonana roa dia noforonina miaraka amin'ny fahaizana Swiss. Ny SABOTEUR dia mikendry ny hamorona firavaka natao ho an'ny mandrakizay, ary mino fa ny fampitaovana firavaka tiana sy tonta tsara amin'ny taranaka ho avy dia ampahany amin'ny fomba fiaina misaina.